368 Days, Full time , Manufacturing
369 Days, Full time , Manufacturing
370 Days, Full time , Manufacturing
376 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Good communication skill and interpersonal skill.
Our company always warmly welcome with hardworking staff, good confidence and good altitude.
There are more than 400 employees' in the company; we are seeking applications from highly motivated persons in the Mandalay, main office and the industrial zone.
YSJ Food staff manufacturing was founded in the year 1992. In the company, there were Yeeshin and brothers' food staff distribution and Joker food staff manufacturing.
•	ဂိုဒေါင်ရှိ အထက်လူကြီးမှ ချမှတ်ပေးသောအလုပ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ •	ဂိုဒေါင်ပစ္စည်းများကို FIFO (First in First Out) အရင်ဝင်သည့် ပစ္စည်းအရင်ထုတ်ပေးရမည်။ •	Stock အ၀င်အထွက်များကို မှတ်သားရမည်။ •	ဂိုဒေါင့်တာ� ...
•	အရောင်းပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Sales Target ချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Way Plan ဆွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Sales Target ပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	Customer Information ကို ကောက်ယူနိုင်ရမည် •	New Customer များ ရှာဖွေနိုင်သူ ဖ� ...
•	အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဖြစ်ပြီး လစဉ်ရောင်းအား ပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	ဈေးကွက်အတွင်း မိမိပစ္စည်းကိုရောင်းချနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	New Outlet များကို ရှာဖွေရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရ ...
•	အလုပ်ချိန် အတွင်း ကွမ်း၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် ကင်းရှင်းရမည်။